Ezweni Linga izithathe ukuze ixazulule leyo ukubhema ugwayi. Ukucwaninga okuningi okuye kwenziwa kuye kwabonisa umonakalo kusuka imikhuba enjalo. Ngakolunye uhlangothi - ukubhema nogwayi, okuyizinto sihluke kakhulu "abafowabo" ezincane.
Namuhla, angathengwa ngokukhululekile esitolo noma umyalelo inthanethi. Kodwa kwaba khona isikhathi lapho le nqwaba elincane amahlamvu ugwayi sasingakwazi kuthola ngakulahla nganoma iyiphi indlela. Babekwazi get kuphela ekhethiwe futhi ahlonishwe izivakashi.
Phakathi namakhulu eminyaka, umlando, okungcono nogwayi-Cuban engimbumbile cult futhi got le ibutho abalandeli nabalandeli bakukhonzile. Phakathi kwabo, zonke izingxenye sabantu: kusukela abasebenzi elula kanzima, bona abaqale badle ukunambitheka kuphela ngamaholidi, izinkanyezi ezivela emhlabeni wonke, ngisho omongameli.
Ngokwesibonelo, uWinston Churchill acishe never Sahlukana lo nogwayi ngibhema ngosuku futhi okungenani ezingu-15. Kuyaziwa ukuthi Dzhon Kenedi eziphoqelelwe kuvinjelwe bonke ukuhweba nge Cuba, okuyinto ezikhiqizwa brand best emhlabeni. ambalwa kuphela abantu bazi ukuthi ngaphambi kokungena idokhumenti efanele kuye amayunithi mayelana 1200 kwalethwa mathupha.
Ososayensi baye baqhuba bacwaninga, phakathi kwesikhathi lapho bengakwazanga ukufika khona umbono owodwa mayelana nezinzuzo ukuthi angaletha ugwayi wangempela-Cuban. Ubuntu abaningi abadumile ezifana Indlovukazi France Ekaterina Medichi wasebenzisa cigar kuhle ekwelapheni izifo ezihlukahlukene.
Eyokuqala wabo waqala ukukhuluma "Santa Maria,", umkhumbi idume Hristoforu yayo Kolumbu. I zezisebenzi echazwe amaNdiya, ukubhema convolution eziyinqaba. Kakade ekhulwini le-17, ke sakwazi ukuqeda ugwayi, labavulekela isahluko esisha emlandweni. The main amasayithi ukukhiqizwa yilezi:
Ekhulwini lama-20, odokotela baye ngisho watusa convolution ugwayi leaf ukubhema abesifazane abakhulelwe, ukuze abazi-stout. Namuhla, nogwayi eqolo futhi eliphezulu wenza ukholwe ukuthi ezweni lakubo - e-Cuba. Ngo 2006 yayibizwa ithengiswe le cigar eqolo, izindleko okwakukhona $ 1150.
Cigar Production - ukususwa amanyela
Enye yezinto ekutholeni ikhwalithi - ipulazi lapho ugwayi Simila. Kuphela kusukela eliphezulu kakhulu ishiya ukuhlangabezana eziningi izidingo, ungakwazi ukuthola okungcono nogwayi-Cuban. Kunoma iyiphi isitshalo self-ukuhlonipha ayisebenzisi noma yimaphi izibulala-zinambuzane noma amakhemikhali. Bamane konakalisa ukunambitheka kanye nephunga elimnandi, elingafunwa ukuthengwa lezi convolution ezincane.
On ifektri ukhethe amahlamvu ezicashile kakhulu futhi ezingavamile, okuyinto zifakiwe isinyathelo sokuqala ukukhiqiza - lwezithelo olubangela ukubila. Le nqubo eziyinkimbinkimbi ukuze unezigaba eziningana. Umphumela okufanele ngcono palatability kanye ukunciphisa okuqukethwe ukungcola ezihlukahlukene, futhi phakathi lapho:
izinhlobo ezahlukene inhlaka,
Ngesikhathi esigabeni sokuqala omiswe akhethiwe amahlamvu e amaphakheji uphawu. Okulandelayo aye egumbini ekhethekile, okuyinto abakutholanga elangeni. Kule nqubo, amaqabunga ugwayi babe flavour ezehlukile. Ngo esigabeni sokugcina ukuvutshelwa kwenzeka esiphezulu ukususwa kungenzeka amanyela ahlukahlukene.
nogwayi-Cuban, ukukhiqizwa kwanoma ebanjwa phezu izimboni odumile Cuba, has a ukunambitheka ehlukile futhi omuhle kakhulu ukunambitheka emizweni ngenxa yokuthi izinyathelo ukuvutshelwa konke saziso. Lokhu kuqinisekisa ikhwalithi, okufanelekelayo sha engcono.
Ngaphambi amahlamvu ugwayi ingasetshenziswa, baye ngempela ibanga elide ukuze izimboni kanye workshop ukuze kuvinjelwe ngisho iphutha kancane noma misstep, njalo leaf is ngeso lokhozi tabaquero. Lokhu abasebenzi abaqeqeshiwe umsebenzi kabani main ukuqapha esigabeni ngasinye zokukhiqiza.
Oku-okususa yonke amahlamvu sikhubazekile nezinambuzane ngephutha abanjwe. abasebenzi abanolwazi kungaba ukuhlunga by criteria ezahlukene:
Ukuze uthole ngempela okungcono nogwayi-Cuban, amahlamvu woza ngengxube - isigaba lapho kulungiselelwa varietal ngesisekelo, bese fed ukuxubana. Le nqubo ingenye yezindlela ezibaluleke kakhulu, ngoba kuyadingeka ukuze ayichaze iphunga amafutha abalulekile.
Lokhu kuzokwenza ukucacisa kahle ukuthi uzobe akhethiwe bese sakhiwa ingxube ebangeni lelitsite. Zazenza le ochwepheshe kweqiniso asebephumelele ukhetho olukhulu eyinkimbinkimbi. Thola umsebenzi akuyona nje kunzima, kuba cishe kungenakwenzeka.
Tabachnik - abantu abaphethe ifomu efanele nogwayi, intengo zazo akuxhomekile nje kuphela esimweni izinga, kodwa futhi ukubonakala. Bona masterfully asingathe chavetoy - umukhwa ekhethekile, ngosizo okuyinto wena ukusika emaphethelweni amaqabunga usike stem.
Ngenxa yokuthi lokhu cigar siqukethe ishidi olulodwa, emoyeni sihamba kalula ngokusebenzisa ke, ukuqinisekisa ukunambitheka nondescript. Ngaphakathi kukhona nje ishidi ezintathu. Omunye wabo has iphunga elimnandi, yesibili inikeza ukunambitheka abe mnene, futhi eyesithathu luyadingeka omlilo efanele.
Cigar cigar bhokisi linezimpendulo nombala ofanayo kanye ukushuba. Abantu abahola inqubo, unawo wonke umhlaba amagama ezidumile esimnandi. Lona isikhundla esiphakeme kakhulu.
Kuyaphawuleka ukuthi izimboni akukho ezishintshayo nhlobo. Zonke izinqubo ababulawa ngokuphelele ngesandla, kusukela ukuqoqwa amashidi ezidingekayo kunanyathelwe tags ekhethekile. Yingakho nogwayi Cuban e Moscow noma imuphi omunye umuzi angathengwa kuphela ngamanani amba eqolo. Uma isabelomali kuhlongozwa kukho okuthiwa, kungenzeka ukuthi mbumbulu noma ukhwaliti ongaphakeme ugwayi.
Ngokuvamile, le mikhiqizo ugwayi zigcinwa amabhokisi ekhethekile. cigar ebhokisini elenziwe emahlathini zasebukhosini. Lokhu kuqinisekisa izimo cishe enhle yokugcina. The main funa - ukuntuleka lokushisa ukweqisa. Uma ucatshangelwe, kunobungozi ugwayi mabhungane.
Namuhla, nogwayi-Cuban eMoscow nakwamanye amadolobha emhlabeni jikelele banezeluleko omkhulu. Ukuze obhemayo abanolwazi akuyona inkinga ukuba benze isinqumo, kodwa saqala kuyoba nzima ukunquma. Phakathi brand eziningi kukhona ezimbalwa ezivelele ngempela nge a umlando ocebile.
abalandeli Ngakho eziningi emhlabeni umbuzo, lokho nogwayi ipendulo enembako ngokungananazi - okungcono cigar-Cuban kuyinto COHIBA. Sha njalo ukubeka bar, ukufinyelela eziningi ezinzima kakhulu. Ikhishwa kuphela imikhiqizo ephezulu, Iphalethi owaziwa enkulu ukunambitheka namaphunga ako.
Ayaziwa kuyinto indandatho Ubamba amehlo imibala zabo ezintathu - orange, abamhlophe nabansundu. Igama COHIBA uvele sibonga amaNdiya, ngubani babiza isitshalo ugwayi. It ubanjwe on futhi waziwa emhlabeni wonke.
Umehluko esemqoka yalolu hlelo brand, ngalo ilula ngempela ukukhomba - anhlobonhlobo okuthandwa futhi ukubukeka azizinhle kakhulu. Kepha umqondo zokunambitha nokuhogela, sebengaqala kusuka soft kakhulu futhi enamandla ekupheleni ngesihluku. Noma ubani angakwazi ukuthenga iqoqo nogwayi-Cuban Bolívar ngokusho ukunambitheka yakho futhi ukujabulela ngokugcwele ngokuthenga kwakho.
Uma sikhuluma ukubukeka, ochwepheshe abaningi uzwakalise besambathekile yabo. Nogwayi nge ukunambitheka esiphundu akuzona kukuhle futhi efika kuqala kungase kubonakale sengathi bangabakaNkulunkulu ukhwaliti ongaphakeme. Kodwa ubani owake wazama Bolívar ugwayi u wanelisa ngokugcwele.
Le brand isibe liyabonakala kuphela Eighties kwekhulu elidlule. Impumelelo nakanjani ifomula elula ukuthi isebenza cishe kuto tonkhe tindzawo. Abadali ukubeka ndawonye kagwayi izinga kungemalengiso futsi cigar-okwenyanga aphakeme.
I kabanzi kunazo brand wayephakathi abasha, sibonga ukunambitheka abancane abahle. I yokuntula yalesi brand akunakubangelwa ububanzi elincane.
LA UGLORIA CUBANA
Iningi abalandeli bazokutshela ukuthi lokhu brand nogwayi abe ukunambitheka omnene ungalwi kakhulu. Ngenxa-ke inani abalandeli sha likhula ngokushesha. Kodwa, LA UGLORIA CUBANA inganikeza ububanzi ngokwanele enkulu yemikhiqizo: kusukela ako uyabukeka eliyingqayizivele futhi kanzima.
Kunzima ukuthola umuntu othanda nogwayi, okuyinto akamazi brand Hoyo de eMonterrey. Iningi lazo sengiqala ukubhema naleli sha. Iqiniso ukuthi nogwayi elula ashise ngokulinganayo futhi anikele izinzwa zokunambitha, okuyinto efana Wabasaqalayo kakhulu.
Imboni waziwa emhlabeni wonke ngoba imfihlo yakhe. Zonke osayizi abe yiphunga ethize emnandi. Kuvele inhlanganisela ezithakazelisayo ngephunga ezimibalabala kudala lokujabulela ubumnandi. Le brand inomlando ezithakazelisa kakhulu futhi ecebile. brand Noble, okuyinto izingcweti nizigcina ngokucophelela izimfihlo zabo.
Enough "omdala" brand, oveza ezixube imikhiqizo, kodwa gqamisa kuyinto ugwayi nge okuthiwa ukunambitheka ukunwaya. Ongoti bathole lokhu into eligugu ezingavamile, lonke babengakuqondi imibono. Naphezu kweqiniso lokuthi abalandeli sha elahlekile, kodwa kukhona namanje okuningi lweli ovame lokhu ikakhulukazi brand nogwayi.
Minyaka yonke amazinga entsha brand best, nogwayi ezivezwa, intengo zazo nje sengathi ngiyaphupha. Njalo umuntu eminyakeni eminingi ahlale okungcono kugwayi ezenziwe e-Cuba.
Kufika kangcono ukuqala ugwayi "lilihle" ephethe ukunambitheka hlangothi. Lokhu kuzovumela ukujwayela nokuqonda ukunambitheka ugwayi. Khona-ke ungakwazi ukuhlola search for the best bona. brand ngasinye has kokukunikela, ngakho ukuqala ukuzama bonke.
Isikhumbuzo Lermontov e Tarkhany: incazelo, isithombe
Kangakanani-visa athuthele eGrisi futhi kanjani it?